5:37:00 AM 2014, movies, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
ဒီဇာတ်ကားကိုအရင်က မြန်မာစာတန်းထိုး နဲ့ တင်ပေးဖူးပါတယ်
အဲဒီတုန်းကတော့ သိပ်မကြည်ပါဘူး..အခု အကြည့်ထွက်လာလို့
ထက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..ဒီဇာတ်ကားကတော့ ပရိတ်သတ်တွေ တော်တော်များများ စောင့်မျှော်နေတဲ့ကားဖြစ်ပြီး၊ စောင့်ရကြိုးနပ်တယ်လို့ ပဲပြောပါရစေ။ အကောင်းဆုံး Superhero ကားမဟုတ်ရင်တောင်မှ အကောင်း ဆုံး X-Men ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်သလို၊ လက်ရှိ နွေရာသီရဲ့ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်မှာ တစ်ခြားဘယ်သူ့ကိုမှ ဒီလောက်အဝေးကြီး ပြန်လွှတ်လို့မရဘဲ၊ Wolverine တစ်ယောက်သာလျှင် သူ့ရဲ့ Healing Power ကြောင့် ဒီ Mission ကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို တားဆီးမယ် ဘာကို တားဆီးရမယ်ဆိုတာတော့
ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုခံစားရတာ ပိုပြီး အရသာရှိပါတယ်။
firedrive က ပါ..၂ နေရာ တင်ပေးထားပါတယ်..
အောက်က Download ကို ကလစ်ပြီး ကြည့်ရှုဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..
ဖုန်းသမားတွေ ဒေါင်းချင်ရင် အောက်က ပုံလေးမှာပြထားပါတယ်...
အဲဒီ မြှားထားတဲ့ နေရာကို နှိပ်ရင်..အောက်က ပုံအတိုင်းကျလာပါမယ်..
အဲဒီမှာ ကိုယ်ကြိုက်တာရွေးပြီး ကြည့်မယ်ဒေါင်းမယ်ပေါ့...
.အောက်က Download ကို ကလစ်ပြီးကြည့်ရှုဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်.
Movie Review ကို ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်မှ ကိုးကားပါသည်.
srt by : http://myanmarsubtitlemovie.blogspot.com/